सुन्दरता असली परिभाषा के हो ?:: Naya Nepal
मान्छेले अक्सर आफुलाई सुन्दर देखाउन यत्न गरिहेका हुन्छन् । कसरी आफ्नो अनुहार, आँखामा चमक ल्याउने, कसरी कपाल नरम र बलियो बनाउने, कसरी ओंठ मुलायम बनउने, कसरी दाँत चम्किलो बनाउने, कसरी समग्र शरीरको ढाँचा आकर्षक बनाउने ?
अक्सर मन्छे आफुलाई अरुको सामुन्ने आकर्षक र भिन्न देखाउन चाहन्छन् । सबैको अगाडि आफुलाई राम्रो देखाउन चाहन्छन् । यसका लागि मान्छेले शारीरिक सरसफाईदेखि ब्युटी ट्रिटमेन्टसम्म, व्यायामदेखि खानपानसम्ममा आवश्यक सतर्कता अपनाइरहेका हुन्छन् ।
सुन्दर कसलाई भन्ने वा कस्ता व्यक्ति सुन्दर हुन् ? यसमा भूगोल, समुदाय र परिवेश अनुसार आ–आफ्नै मानक छन् । सुन्दरताको सर्वव्यापी र सर्वस्विकार्य मान्यता भने छैन । यसैले त भनिएको हो, सुन्दरता भनेको हेर्ने आँखा र बुझ्ने मनमा निर्भर गर्छ ।
यद्यपि शारीरिक नापतौल वा अनुहारको बनौट, छाला–कपालको प्रकृति अुनसार पनि सामान्यत सुन्दरताको लेखाजोखा गर्ने गरिएको छ । यस हिसाबले कोही जन्मजात नै शारीरिक हिसाबले राम्रा देखिन्छन् भने कसैले बिस्तारै आफुलाई परिमार्जन गर्छन् ।
सुन्दर कसरी बन्ने भन्ने दौडमा पुरुषभन्दा महिलाहरु अगाडि छन् । त्यही कारण महिलाहरुकै लागि सौन्दर्य प्रसाधन पनि बढी उपलब्ध छन् । उनीहरुलाई लक्षित गरेर पार्लरदेखि सौन्दर्य प्रशाधनसम्म भरिभराउ छन् ।
त्यसो त आफुलाई सुन्दर देखाउने खोजीमा मान्छेले अनेकथरी गरगहना, चस्मादेखि पहिरनसम्मको संयोजन मिलाउने प्रयास गर्छन् । तर, मेकअप, ब्युटी ट्रिटमेन्ट, गरगहना वा पहिरनको संयोजनले मात्र मान्छेलाई आकर्षक वा सुन्दर देखाउने हो ?
बलिउड फेसन डिजाइनर सब्ससाची मुखर्जीको धारणा यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘ सुन्दरताको बारेमा धेरै लेखिएको छ, तर मैले अक्सर यो महसुष गरे कि सुन्दरता वास्तवमा आफु स्वयम्लाई स्वीकार गर्ने र आफुलाई सहजता बनाउने हो । जुन पल तपाईं आफुलाई लिएर सहज हुनुहुन्छ, तपाईं सुन्दर महसुष गर्नुहुनेछ ।’
सुन्दर हुनु भनेको आवरणमा आफुलाई चिरिच्याट्ट देखाउनु मात्र होइन, भित्रैबाट आफ्नो आत्मविश्वास र दृढता प्रकट गर्नु पनि हो । आत्मविश्वास र दृढताले मान्छेको व्यक्तित्व प्रभावशाली देखिन्छ । अतः खास सुन्दरता यसैमा झल्कन्छ ।
आध्यात्मिक गुरु जग्गी बासुदेवसँगको साक्षतकारमा सबसाची अगाडि भन्छन्, ‘जब तपाईं आफुलाई सहज महसुष गर्नुहुन्छ, तब तपाईंको आत्मविश्वासले अरुलाई आकर्षित गर्छ । सायद असली सुन्दरता यही हो ।’
उनलाई सोधिन्छ, ‘एक पुरुषको लागि सुन्दरता के हो ?
कसैले पनि सहज रुपमा आफुलाई स्विकार गर्छ भने उनमा सुन्दरता झल्कने सबसाचीको बुझाई छ । उनले भनेका छन्, ‘मेरो विचारमा त्यो पनि सहजता र आरम हो ।’ उनले यसलाई अरु विस्तारमा यसरी बताएका छन्, ‘हेर्नुहोस्, आजको दुनियमा हामी सबैको साथ के हुन्छ ।
म तपाईंलाई सानो उदाहरण दिन्छु । म योग गर्दिन र कामको द’बावको कारण मैले शरीरलाई एकदम हे’ला गरिरहेको छु । म ध्यानलिं’गमा बसेको थिएँ, जबसम्म घण्टी बजेन । एकपटक मैले नितान्त आफ्नै लागि पन्ध्र मिनेट बिताएको थिएँ ।
परासी, नारायणी नदीमा पानीको ब’हाव ब’ढेपछि गण्डक ब्यारेजका ३६ वटै ढोका खो’लिएको छ ।तीन दिनदेखि परेको लगातारको वर्षाका कारण नदीमा पानीको सतह ब’ढेसँगै जो’खिम ब’ढेकाले ब्या’रेजका सबै ढोका खो’लिएको भू’आर्जन तथा जनसम्पर्क कार्यालयका जनसम्पर्क अधिकारी तारासिंह थापाले बताए । व्या’रेजले भारतको बिहार प्रदेशस्थित भैं’सालोटन र पूर्वी नवलपरासीलाई जो’डेको छ ।ब्या’रेजमा अहिले ३ लाख ३२ हजार क्यू’सेक प्रति सेकेण्ड पानीको ब’हाव छ । यो ब’ढ्ने क्रममा छ । ४ लाख क्यू’सेक पुगेपछि उच्च ख’तरा मानिन्छ ।
दे’वघाट क्षेत्रमा पानीको सतह ख’तरामा पुगेको छ ।उक्त पानी क्रमशः बग्दै आएको र त्यसले ब्या’रेजलाई समेत जो’खिममा पार्ने भएकाले स’जगता अ’पनाइएको थापाले बताए । यसैबीच गण्डकमा पानीको सतह ब’ढ्दै गएपछि त’टिय क्षेत्रका स्थानीयलाई स’जगता अ’पनाउन आग्रह गरिएको पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले बताए ।ब्या’रेजका कारण पश्चिम नवलपरासीका करिब ४० गाउँ डु’बानको जो’खिममा पर्दै आएका छन् । संभावित क्ष’तिलाई जो’गाउन जो’खिम क्षेत्रमा पूर्वतयारीका साथ सु’रक्षाकर्मीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाठकले बताए ।